Umqondiso we tattoo | Ukuzoba
Xa sijonga uyilo lwe tattoo, ngaphandle kokuba sele sicacile malunga noko sikufunayo, sixhomekeke kwinto ethetha lukhulu kuthi, njengophawu lwe-Om. Kwaye asinakulibala ukuba siza kuyinxiba ubomi bethu kulusu lwethu, ke kufanele ukuba iyinto ethile ukuba ngokwenene ifikelela kuthi kwaye ayiyonto nje yobuhle.
Kungenxa yoko le nto namhlanje siza kuthetha ngesimboli esinzulu kakhulu, esidumileyo nesikhuthazayo esinamathuba amaninzi ahlukeneyo, njengoko siza kubona ngezantsi. Kanjalo, Sithetha ngetattoo ezinophawu lwe-Om. Ngendlela, sicebisa ukuba ujonge eli nqaku linxulumene noko Iitatoo zeyoga, uluhlu olupheleleyo lokuphefumlelwa.
1 Intsingiselo yeeTattoos
2 Silufumana phi olu phawu?
3 Izimvo zetattoo zomqondiso
3.1 Incinci om
3.2 Imantra iphela
3.3 Om esifubeni
3.4 Ganesha, uthixo wendlovu
3.5 Om nge unalome
3.6 UHamsa kunye no-Om
3.7 Umqondiso we tattoo ngomthi
3.8 Iitattoo zeOm ngeentyatyambo ze-lotus
Njengoko besesitshilo, enye yeempawu ezithandwayo zi-Om. Ngenye yeemantras ezingcwele zeenkolo zedarma, ifuzisela uBrahman ongcwele kunye nendalo iphela. KumaHindu sisandi sokuqala, imvelaphi kunye nomgaqo uninzi lwamazwi aphakamileyo anamandla, amagama okanye izandi. Ngophawu lwe-Om, siphambili kwizinto eziyimfuneko. Kwelinye icala, oko kuthetha umanyano oluphezulu, oluphakanyisiweyo, umanyano phakathi kokomoya nokwenyama. Ingcwele, isandi esivela kuzo zonke ezinye izandi.
Kwinqanaba leetattoo, inika uyilo oluthile, ukuba yimvelaphi yokomoya, kwaye amagophe ayo amathathu athetha ukubazi komntu kunye nazo zonke izinto ezibonakalayo. Inqaku lesimboli lithetha elona lizwe liphezulu lokuqonda, bubunye, ngamandla.
Enyanisweni, ukubizwa kwegama u-Om kudibene neentsingiselo ezintathu eziphambili oko kubandakanya yonke into esisandula ukuyithetha. Ke, kuthathelwa ingqalelo ukuba indlela yokubiza amagama yoqobo ibukeka ngakumbi kuM:
La a Ifuzisela ukuqala, indalo eyenziwe nguBrahma, uthixo ongumdali.
La u Kukuqhubeka kobomi, okuqulathwe nguthixo uVishnu.
Kwaye ekugqibeleni m luphawu lukaShiva, uthixo wokutshabalalisa.
Aba thixo bathathu baqulethe i-trimurti, ubathathu emnye ogcina ibhalansi yehlabathi, kwaye oko kubandakanya enye yeentsingiselo zokugqibela zophawu lwe-Om, ibhalansi eyimfuneko kubukho bayo yonke ukuze iqhubeke.
Silufumana phi olu phawu?
Isimboli ye-Om yaziwa kakuhle kubo bonke, nangona ifike eNtshona kutshanje. Ngaphambi kokuba ibekho kakhulu kwiinkolo eziphambili zaseIndiya, ubuHindu, ubuBuddha kunye nobuJainism, apho kuqheleke ukuba kufumaneke kokubini kwizibhalo ezingcwele, njengakwizakhiwo, imifanekiso eqingqiweyo kunye nazo zonke iintlobo zeendawo apho ufuna ukukhupha intsingiselo yazo. Ukongeza, inokubhalwa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo, nokuba kukwisiSanskrit, isiTibetan, isiKorea ... esenza ukuba ilungele ii-tatoo ngombhalo.
Apha kwavela kwi-60s, Kunye neyoga, xa kwakukho ukunyuka kokomoya okwabamba zonke izinto ezivela eMpuma, ngakumbi ezivela eIndiya.
Izimvo zetattoo zomqondiso
Njengoko ubonile kwicandelo elidlulileyo, ukuba nesimboli seOm kuthetha, njengomthetho oqhelekileyo, ukuba itattoo yethu ingaphaya kwele tattoo entle.
Enye yeendlela ezininzi ezinokuthi tattoo ibonakalise olu phawu lincinci kakhulu. Ukuba luphawu olucocekileyo kwaye lubukeka luhle, ukongeza, ukuba lincinci kakhulu kujongeka kukuhle kuzo zonke iindawo njengendawo yokulwa: esihlahleni, kwiminwe, emaqatheni ...
Abantu abahlali ngo-Om kuphela, ukuba ufuna ukuhamba nayo nenye into, Unokukhetha ukwenza i-tattoo yemantra epheleleyo enolu phawu njenge-protagonist. Njengoko zininzi iilfabhethi ezinokubhalwa kuyo, khetha eyona inxulumene kakhulu nemantra oyithandayo. Ewe kunjalo, qiniseka ukuba ibhalwe kakuhle!
Imilo ejikelezileyo ye-Om ijongeka intle kwiindawo ezininzi. Isifuba sesinye sezinto ezingalindelekanga. Nokuba ukhatshwa yimantra, njengefoto, okanye uwedwa, licebo elihle ukuba kukwakhona nemandala ekhoyo yokunika ubunzulu ekwakhiweni. Dlala ngezithunzi kunye noburhabaxa (imigca ebhityileyo okanye engqindilili, amachaphaza…) ukwenza uyilo hypnotic.
Ganesha, uthixo wendlovu
Omnye wabalinganiswa abaphambili kwiitattoo ezinophawu lwe-Om nguthixo uGanesha, ungunyana woothixo ababini esikhankanye ngasentla. Lo thixo unentloko yendlovu, owaziwayo ukuba uyanceda ekususeni izithintelo, unxulumene ngokusondeleyo nophawu u-Om. Ngapha koko, imantra yakhe yile oṃkārasvarūpa, 'Om luhlobo lwayo' njengoko kukholelwa ukuba lolu hlobo lomzimba wombono osemva kwesimboli.
Iitattoo zikaGanesha zipholile kakhulu ngazo zonke iindlela, nokuba zinombala, mnyama namhlophe, zichaziwe okanye zenziwe ngaphezulu, nangona kuhlala kukho utyekelo lokubeka uphawu lwe-Om ebunzini lakhe. Thatha ithuba lokuyigqamisa, umzekelo, ngetattoo emnyama mhlophe kwaphela kodwa eneenkcukacha ezibomvu, okanye ukuyikhapha ngayo yonke imantra ukuyinika into eyahlukileyo neyodwa.
Om nge unalome
Sele sithethile malunga nokungafakwanga ngamanye amaxesha. Ukuba ngumgca wobomi, kwaye umele bonke ubunzima esiye sahlangabezana nabo apha endleleni, isiphelo sendalo kukumelwa kuka-Om ebonisa ukuba sifikelele kwimeko yokugcwala kunye nokukhanyiselwa.
UHamsa kunye no-Om
Iinkcubeko ezimbini ezibonakala zikude kuyilo olunye olubukeka buhle. I-hamsa luphawu lwakudala lokukhusela kwimimoya emdaka eqhelekileyo yenkcubeko yama-Arabhu neyamaJuda. Kule meko, uyilo ludibanisa isandla sika-hamsa esineminwe emihlanu kunye nophawu lwe-Om endaweni yamehlo oqobo.
Umqondiso we tattoo ngomthi
Uyabona ukuba uphawu lwe-Om lunokudityaniswa kunye nobuninzi beendlela zoyilo ezahlukeneyo, kunye nobukhulu obahlukeneyo kunye neendawo. Kule meko itattoo idityaniswe nomthi (isimboli elungileyo edityanisiweyo, kuba imithi ikwanxulumene nokunxibelelana nehlabathi, ngakumbi nendalo) Ngokuqinisekileyo oko kuya kuba nomtsalane xa sele unombala okanye umnyama.
Iitattoo zeOm ngeentyatyambo ze-lotus
Ekugqibeleni, Nika izimvo ukuba lo mfuziselo, u-Om, kuyinto eqhelekileyo ukuyifaka kumvambo weentyatyambo zeentyatyambo. Olunye uphawu ngamandla amakhulu, kwaye yile ntyatyambo ye-lotus iyakwazi ukuzalwa kumdaka, elawula ubushushu bayo kunye neenkcukacha ezingapheliyo zokuziqhelanisa nokuzalwa naphina. Yimbonakaliso yamandla, yobunyulu.
Iitattoos ezinophawu lwe-Om zinomdla kakhulu kuzo zombini izimvo kunye nentsingiselo, akunjalo? Khawusixelele, unayo itattoo efanayo? Ithetha ntoni imeko yakho? Njengamaxesha onke, ukuba unesibindi sokwabelana ngetatoo zethu nathi, singavuya ukukunceda.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » IiTattoos zonqulo » Iitattoos ezinophawu lwe-Om, imeko yokomoya kulusu
UCamilo Uribe sitsho
Molo, ndifuna ukwenza umvambo weGayatr Mantra kodwa andazi ukuba kukho naziphi na izithintelo kuba luphawu olungcwele: Ndifuna ukuyibeka egxalabeni lam lasekunene (ayinamsebenzi ukuba isekhohlo okanye ilungile) apho Ngaba kuthintelwe malunga noyilo (ngenxa ye-yantras kunye nabanye)? Enkosi, ngethemba ungandinceda. Ukubulisa.
Phendula kuCamilo Uribe
Iingqondo zobuchopho kunye nentliziyo, indibaniselwano enomdla kakhulu!